प्रेममा असफल भएपछि बैंकका कर्मचारी गरे आत्महत्या, के छ सुसाइड नोटमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रेममा असफल भएपछि बैंकका कर्मचारी गरे आत्महत्या, के छ सुसाइड नोटमा ?
महेन्द्रनगरः एनआईसी एशिया बैंकका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१४ रानीबाँसका धिरज न्यौपाने रहेका छन् ।
उनले कञ्चनपुरमा बैंक रहेको घरको तेस्रो तलामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् ।
उनले प्रेममा असफल भएपछि आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनले सुसाइड नोट भेटिएको छ, जसमा एक युवतीलाई माया गरेका र युवतीले धोका दिएपछि आत्महत्या गरेको उल्लेख छ ।
ट्याग्स: आत्महत्या, एनआईसी एशिया बैंक, प्रेम